Anarana efa nampoizin’ny maro : voatendry ho Praiminisitra i Mahafaly Solonandrasana | NewsMada
Anarana efa nampoizin’ny maro : voatendry ho Praiminisitra i Mahafaly Solonandrasana
Efa nampoizina? Ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Mahafaly Solonandrasana Olivier, no voatendry ho Praiminisitra vaovao. Anarana efa nampoizin’ny maro…
Teo amin’ny fotoana farany: notendren’ny filohan’ny Repoblika, Rajaonarimampianina, ho praiminsitra ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Mahafaly Solonandrasana Olivier, tao amin’ny governemanta Ravelonarivo. Araka ny didim-panjakana novakin’ny sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny Repoblika, ny jeneraly Ralala Roger, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, omaly.
Ora vitsivitsy taorian’ny nanoloran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max, niaraka tamin’ny solontenan’ireo vondrona parlemantera, ny anaran’izay ho praiminisitra izany. 13 ny anarana tao anaty lisitra tamin’izany. Raha ny siosion-dresaka nandeha, iray amin’izy sy ny sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Paza Didier Gérard, no ho voatendry.
Mpikambana ao amin’ny HVM izy
Anisan’ny mpikambana eo anivon’ny antoko politika eo amin’ny fitondrana Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) ny Praiminisitra. Ahalalana azy amin’izany ny fampandresena ny antoko HVM tamin’ny fomba rehetra: fahazoana ben’ny tanàna sy mpanolotsain-tanàna be indrindra tamin’ny fifidianana kaominaly; farany teo, ny fifidianana loholona.
Nanoratra ny boky “Ny anjara toeran’ny kaominina miatrika ny ady amin’ny fahantrana eto Madagasikara” izy, taona 2004. Nahombiazany izay nataony tamin’ireo iraka sy andraikitra napetraka taminy. Heverina fa hahavita be lavitra noho izay efa vitany teo aloha amin’ny fitarihina ny governemanta vaovao hotarihiny.
Manampahaizana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana izy
52 taona ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, manampahaizana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana na adminisitratera sivily, ary saika nandalo ny dingana rehetra amin’izany: sous-préfet tany Befandriana Avaratra, septambra 2003- avrily 2004; préfet faritra Boeny, taona 2004; avy eo, sekretera jeneralin’io faritra io.
Efa mpanara-maso ny fanatanterahana ny fifidianana teo anivon’ny minisiteran’ny Atitany izy, janoary 2006-avrily 2006; sekretera jeneralin’ny faritany Toliara, mey 2006-febroary 2008 ; talen’ny fitantanana ny lafintany ary tale nasionaly ny tetikasa Ezaka kopia ho an’ny ankizy niarahana tamin’ny Unicef, mey 2009-avrily 2014.
Voatendry ho minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izy, ny 18 avrily 2014, hatramin’ny nijoroan’ny governemanta Kolo Roger, ary mbola nitana izany andraikitra izany tamin’ny governemanta Ravelonarivo .
Havanana amin’ny fikarakarana sy fanaraha-maso ny fanatanterahana ny fifidianana ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Tafiditra ao anatin’ny fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika, taona 2018, izao fanendrena azy izao?